Monday, 06 April, 2020 | २०७६ चैत्र २४ गते , सोमवार
महापण्डित राहुल साँकृत्यायनको रचनात्मक महायात्रा
२०७६ फाल्गुन १० गते , शनिवार प्रकाशित
—लोकनारायण सुबेदी— औपचारिक शिक्षा नपाएका र शैक्षिक योग्यता नभएका मानिस पनि महा बिद्वान र १४८ वटा बहु आयामिक उत्कृष्ट किताबका लेखक हुनसक्दछन् भन्ने कुरा आफैमा एउटा रोमाञ्चक र प्रेरणास्पद कुरा हो । यस्तै एकजना महालेखक थिए महापण्डित राहुल साँकृत्यायन । दुइ बर्ष अघि मात्र २०१८ मा भारतका ती प्रसिद्ध माक्र्सबादी रचनाकार महापंडित राहुल सांकृत्यायनको १२५औं जन्म जयन्ति मनाइएको थियो । १८९३ मा उनी उनको मावली गाउँ उत्तरप्रदेशको पन्दहा आजमगढ भारतमा जन्मेका थिए । उनी ७० बर्षको उमेरसम्म बाँचे। आफ्नो जीवन कालमा उनले दर्शन, बिज्ञान, इतिहास, कथा, कहानी, उपन्यास, जीवनी आदि गरेर १४८ वटा किताब लेखे । मार्क्सबादको बैचारिक यात्रा उनको जीवन पर्यन्तको मूल कुरा थियो । उनले सँस्कृत, फारसी, ऊर्दू, अग्रेजी, पाली, प्राकृति भाषाहरुमा अबाध निपूणता हासिल गरेका थिए । यसका अतिरिक्त उनले तिब्बती, रुसी, र फ्रान्सेली भाषा पनि जानेका थिए । रुसी र तिब्बती भाषामा त उनले तिनको ब्याकरण नै लेखे । उनले राष्ट्रभाषा कोश तयार पारे भने तिब्बत–हिन्दी कोष पनि लेखे । बौद्ध धर्म सम्बन्धि अनेक दुर्लभ पाण्डुलिपीहरु तिब्बतबाट खच्चडलाई बोकाएर श्रीलंकासम्म पु¥याएर बिद्यालंकारमा दान दिए भने पटना बिश्वबिद्यालयको पुस्तकालयमा पनि महत्वपूर्ण बौद्ध ग्रन्थहरु राखे । उनले पैसाको कुनै पर्वाह गरेनन् । उनी बिश्वभरी नै खुब घुमे र घुमक्कड आचर्यको उपनामलले समेत चर्चित पनि बने । उनले घुमक्कडशास्त्र नामको यात्राशास्त्रको किताबै लेखेका छन् । कथा, उपन्यास पनि लेखे । बाइसौं शदी उनको भबिष्यमूलक कहानी हो भने "भोल्गा से गंगा मानब सभ्यताको बिगत ६ हजार बर्ष पुरानो इतिहासको किताब हो ।
महापण्डितले ‘क्या करें’ ? ‘भागो नही दुनियाँको बदलो, ‘साम्यबाद ही क्यो’ ? ‘तुम्हारी क्षय’, ‘कम्युनिष्ट क्या चाहते हैं, ? ‘राम राज्य और मार्क्सबाद’, जस्ता प्रसिद्ध बिचार प्रधान पुस्तकहरु पनि लेखे र मार्क्सबादको ज्ञानभण्डार बढाए । जुन किताबहरु पढी पढीकन कयौ यूवाहरु भारतमा र अन्यत्र पनि मार्क्सबादप्रति आकर्षित र संगठित पनि भए अनि यो आन्दोलनमा पनि लागे ।
राहुल साँकृत्यायनले बौद्ध धर्मका अनेक ग्रन्थहरुको मूलरुपमा रक्षा गरेको मात्रै होइन, अझ त्रिपिटक जस्ता महाग्रन्थको टीका समेत लेखेर उनी त्रिपिटकाचार्य पनि कहलिए । भारतका आचार्य रामचन्द्र शुक्लाले आफ्नो हिन्दी साहित्यको इतिहासमा उनको नाम त्रिपिटकाचार्यकोरुपमा बडो आदरपूर्वक लिएका छन् । साँकृत्यायलने सरहपका दोहाहरुको पनि छायानुबाद प्रकाशित गरे,जसबाट हिन्दी साहित्यको आदिकालको स्वरुप बदलियो । हिन्दी साहित्यको बृहद् इतिहास(भाग सोह«) को सम्पादन, इस्लाम धर्मको रुपरेखा र ऋग्बैदिक आर्यहरुको बारेमा पनि उनले लेखे । बिश्वको अग्लो हिमालय क्षेत्र त उनको साहित्यिक साँस्कृतिक भाषिक आदि क्षेत्रमा काम गर्ने घर आँगन जस्तै थलो बनेको थियो । भारतका चर्चित प्रधानमन्त्री नेहरु समेतले यी बहु प्रतिभाशाली ब्यक्तित्वको प्रसंशक बन्नु परेको थियो ।
राहुलले राजनीतिक आन्दोलन पनि गरे र जेल गए । कम्युनिष्ट बने, त्यसमा ख्याति पनि कमाए तर आफ्नो बिचारका लागि आफ्नो प्रिय कम्युनिष्ट पार्टी छोड्न पनि तयार भए, हच्किएनन् । तर कम्युनिष्ट आन्दोलन छोडेनन् । यो उनको जीवनका अभिन्न अंग बनिरह्यो ।
एकजना यस्ता मानिस जो कनै एउटै ठाउँमा टिकिरहँदैन , नयाँ नयाँ ज्ञानको भोकले उसलाई सारा संसार भरी घुम्न लगाउँदछ । निरन्तर अस्थिरतामा पनि उनको कलम एक पल रोकिदैन । उनी अरु जस्तो लेखक थिएनन् तर साच्चैका लेखन कला भएका र निरन्तर लेखिरहने लेखक थिए । यूरोपको पुनर्जागरण कालीन लेखकहरु जस्तै उनी बहु बिषय ज्ञाता र कर्मठ ब्यक्तित्व थिए । त्यसैले मानिसहरु उनलाई बिश्वकोषिय प्रतिभा(इनसाइक्लोपेडिक)का धनी भन्ने गर्दथे र मान्दथे ।आज पनि उनको तुलनामा अर्को कोही त्यस्तो बहु आयामिक प्रतिभाको धनी मानिस जन्मेको देखिदैन । पुरातत्वदेखि आधुनिक ज्ञानसम्मको सम्बल बोकेका मेधा, कुशल, प्रष्ट र कुशाग्र बुद्धि भएका रचनाशील र त्यत्तिकै कल्पनाशील पनि थिए महापण्ति । आज पनि भारतको हिन्दी क्षेत्र र खाशगरी बिहारमा त्यसमा पनि कम्युनिष्ट बिचारधाराको जे जति प्रभाव बाँचेको छ त्यहाँ कतै न कतै राहुल साँकृत्यायनको ‘भागो नही दुनिया को बदलो’देखि लिएर उनका अनेक पुस्तकहरुको अबश्य पनि अहिलेसम्म हात रहेको जानकार अन्बेषकहरु बताउँदछन् ।
महापण्डितले माक्र्स एंगेल्स, लेनिन, स्टालिन, माओ र हो चि मिन्हको क्रान्तिकारी जीवनीमाथि प्रकाश पार्दै महत्वपूर्ण किताबहरु पनि लेखे । तर कतिपय भाषा र जातिका सम्वन्धमा उनको कम्युनिष्ट पार्टी नेतृत्वसँग पटरी खाएन । जसले गर्दा उनले पार्टी छोडे तर कम्युनिष्ट आन्दोलन उनले छोडेनन् । यी महापण्डित नेपालमा पनि पटक पटक आएका थिए । उनको एउटा कृति ‘वाइसवी शदी’ नेपालमे बसेर नेपालकै सेरोफेरोमा लेखेको भन्ने गरिन्छ । वास्तवमा तिब्बतबाट महत्वपूर्ण बौद्ध ग्रन्थहरु उनले नेपालकै बाटो भएर खच्चडमा भारत र श्रीलंकासम्म ओसारेका थिए । उनले रुस जाँदा त्यहाँको भाषा सिक्ने क्रममा एक जना रुसी महिलासँग बिबाह गरेका थिए । पछि तिब्बत–हिन्दी कोष तयार पार्ने क्रममा तिब्बतमा रहँदा पनि उनले अर्को बिबाह गरेको बताइएको थियो । जीबनको अन्तिम काल उत्तराद्र्धमा भने उनले एकजना नेपाली महिला जो दलित समुदायकी थिइन् कमला दर्जी(दार्जिलिङ्ग)सँग बिबाह गरेका थिए । उनकै कारणले कमला दर्जी साँकृत्यायनले भारतको उच्च सम्मान पाउने गरी आफ्नो प्रतिभा तिखार्ने अवसर पनि पाएकी थिइन् । उनले प्रसिद्ध पुस्तक बाइसवी सदीमा नेपालका बारेमा पनि बिशेष उल्लेख गरेका थिए । तर नेपालको तराईका बारेमा उनको ज्ञानको सीमा कमजोर रहेको पाइन्छ र त्यहाँ भारतीयहरु बस्ने गरेको र तिनलाई नेपाली शासकहरुले हेप्ने गरेको भनेर तराईका आदिबासीहरुलाई गलत किसिमले ब्याख्या गर्न पनि पुगेको देखिन्छ ।
गल्ती ठूला मानिसहरुबाट पनि हन्छ नै । जे होस् यस्तो बहु प्रतिभाका धनी ब्यक्तित्वका कोही शत्रु थिएनन् भन्ने कुरै हुँदैन । अबश्य थिए । उनको इष्र्यालाग्दो प्रतिभाका कारण उनले साथी भाइ र कम्युनिष्ट पार्टी पनि त्याग्नु पर्ने स्थिति खडा भयो । तर सामान्य औपचारिक शिक्षा पनि नपाएका राहुल साँकृत्यायन जसरी आफ्नो ओजस्वी प्रतिभाले महापण्डित बने त्यो कम रोचक र इष्र्याकारी छैन । यस्ता बहुप्रतिभाशाली बिद्वान लेखक बिश्वमा नै बिरलै जम्निने गर्दछन् ।
कोरोना भाइरसबाट बच्न बैशाख २० सम्म लकडाउन गर्नुपर्छ
चिकित्सक पुत्रलाई एक असल र सचेत पिताको कर्तव्ययुक्त भावुक पत्र
दानबीर दम्पत्तिले राष्ट्रिय आबिश्वकार केन्द्र र षडानन्द कोषलाई दिए दान
आलोपालो साकोसले ११ दिनको कर्जाको व्याज मिनाहा गर्ने
कोरोना भाइरस महामहारी बिरुद्ध कपिलबस्तुमा निरन्तर जनचेतना
शुक्रबार नमाज पढ्ने बारे मदरसा मस्जिदका अध्यक्षरुको संयुक्त बिज्ञप्ति
अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवसमा भाइरस सम्बन्धि अन्तरक्रिया
भलिबल : मणिमुकुन्द रनिङ शिल्ड उपाधि बागलुङलाई
एक सातासम्म भारत र चीनसँगको आबागमन बन्द गर्ने सरकारको निर्णय
चीनमा कोभिड–१९ बिरुद्ध लड्दा शहादत र शिकार भएकाहरुको सम्मानमा राष्ट्रिय शोक
कोरोना संक्रमित १० लाखभन्दा बढी मृतक ५२ हजार नाघ्यो
महामारीको सन्त्रासमा मानब जीवन र जीजीबिषाको आशा
कोरोनाबाट ४६ हजार बढीको मृत्यु : संक्रमित ९ लाख बढी
Copyright © nepalpatranews.com, All rights reserved. Powered by : Al Mawadah ITSofab